शेयर बजार कता ? | आर्थिक अभियान
शेयर बजार कता ?
शेयरबजार ४ हजार पुग्छ भन्दै हल्ला गर्नेहरू अहिले पनि बजार बढ्छ भन्दै छन् । तर, यस्ता हल्लाका पछाडि लागेर लगानी गर्नेहरू ऋणमा डुबेका छन् वा आफूसँग भएको मूल धन पनि गुमाउन पुगेका छन् । बजार निकै तल आएको पनि छैन माथि पनि जान सकेको छैन । तर, अड्कलबाजहरूले अनेक गफ लगाएर बजारबारे गफ दिँदा सामान्य लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । आश र त्रासको खेल मानिने शेयरबजारमा यी दुवै कुरामा चलखेल गरेर केही टाठाबाठाले कमाएका छन् । अझ केही ठूला लगानीकर्ता र लगानीकर्ता संगठनहरूले यसमा चलखेख गरेर बजार आफूअनुकूल बनाउने प्रयत्न गरेको पनि पाइन्छ । सातादेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको शेयरबजार आज आइतवार पनि सामान्य अंकले घटेर बन्द भयो ।
युक्रेन–रूस युद्धले विश्व अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने अनिश्चित बनेको छ । युद्ध चर्र्किंदै गए विश्व नै मन्दीमा जान सक्नेतर्क पनि गरिँदै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र सीधै प्रधावित हुन सक्छ । अहिले नै नेपालको अर्थतन्त्र नराम्ररी बिग्रिसकेको छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आइसकेको बताइन्छ । महँगी निकै बढेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न पाइरहेका छैनन् । बैंकहरूबाट कर्जाका रूपमा गएको पैसा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गइरहेको छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यस्तैै घरजग्गाको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र विस्फोट हुन सक्ने केहीको आकलन छ । ब्याजदर बढेर आगामी असारसम्ममा १८ प्रतिशत पुग्ने विश्लेषण केही बैंकरले गरेका छन् । यस्तोमा शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा मुद्दती खातामा लगानी गर्नु फाइदाजनक हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताको सोचाइ छ । अहिले नै मुद्दतीमा ११ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ । बैंकहरूको शेयर किनेर त्यति मुनाफा निकाल्न सकिन्छ भन्ने देखिँदैन । अर्थतन्त्र सुधार आएमा भने कुरा अर्कै हो । अतः शेयर बजार अभैm तल जान सक्ने अथवा अहिले गरेको लगानीले सजिलै प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।